Director of Medical Action Myanmar (MAM) နှင့် အဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံတွေ့ဆုံ မြန်မာစားသုံးသူသမဂ္ဂ (Myanmar Consumers Union) ၏ နယကနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လက်ခံတွေ့ဆုံ ကျောင်းကျန်းမာရေးဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀) ကျင်းပ (၆၆) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ နှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
ဆေးပညာကျွမ်းကျင်မှု ပုံတူပြု လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနအဆောက်အဦ ဖွင့်ပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
02 Dec 2019 Read More ..
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ e-Government လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်
29 Nov 2019 Read More ..
25 Nov 2019 Read More ..
(၂၀) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များညီလာခံနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (25-11-2019)
30th SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမားများအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်က တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြား
19 Nov 2019 Read More ..
18 Jan 2020 new
17 Jan 2020 new
15 Jan 2020 new
Director of Medical Action Myanmar (MAM) နှင့် အဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံတွေ့ဆုံ
Union Minister Dr. Myint Htwe receives Director of Medical Action Myanmar (MAM) and team
MoHS3Years Achievement
လက်ပ်တိုစပိုင်ရိုးစစ် (Leptospirosis) ရောဂါ သတိပြုပါ
အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သိရှိလိုက်နာရမည့် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဆိုင်ရာ အဓိကအချက်အလက်များ (July 2019)
Chikungunya - ချီကန်ဂန်ညာ (ဆင်တုပ်ကွေး) ရောဂါ
အနာကြီးရောဂါ (Hansen's Disease or Leprosy)
သတိပြုဖွယ် E - စီးကရက် အန္တရာယ်
သတိပြုရှောင်ရှားရမည့် စပ်ဆေးအန္တရာယ် အဓိကအသိပေးချက်
သတိပြုရှောင်ရှားရမည့် စပ်ဆေး (ပိုစတာ)
Vitamin-D ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အရိုးပျော့ရောဂါ (Rickets)
လူတိုင်းအတွက် သက်စောင့်ဓာတ်များ ဖြည့်စွက်ထားသော အားဖြည့်ဆန်
မဟာသင်္ကြန်ကာလ အပူဒဏ်အန္တရာယ်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အန္တရာယ်အထူးသတိပြုဖွယ်
မိခင်နို့ရည်၏ဂုဏ်သတ္တိနှင့် အရေးပါပုံများ၊ မိခင်နို့ရည် (Breast Milk)
မိခင်နို့ရည်၏ဂုဏ်သတ္တိနှင့် အရေးပါပုံများ၊ နို့ဦးရည် (Colostrum)
Union Minister's Page
Pneumonia: Traveller Advice for Wuhan Viral Pneumonia - ခရီးသွားများအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက် (7-1-2020)
`	`	P
Influenza: ဆောင်းရာသီကာလ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါများဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပေးနှိုးဆော်ချက် (၈-၁-၂၀၂၀)
`	`	I
Nutrition: Myanmar Micronutrient and Food Consumption Survey MMFCS (2017-2018) Interim Report (Feb 2019)
`	`	N, Report
MoHS Paperless Workshop System
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၊ ညီလာခံများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ အစရှိသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များ၊ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ယခု website တွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖော်ပြထားရှိပါသည်။
Mobile Tablet ကဏ္ဍ
မြို့နယ်/တိုက်နယ် ဆရာဝန်များနှင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များအား ဖြန့်ဝေထားသည့် Mobile Tablet များတွင်ပါဝင်သော Applications နှင့် စာအုပ် စာတမ်းများ
Newsletter (Vol. 4, No. 1)
JAN 2019 Download View
JAN 2018 Download View
Newsletter (Vol. 2, No. 2)
JUNE 2017 Download View
Newsletter (Vol. 2, No. 1)
FEB 2017 Download View
Newsletter (Vol. 1, No. 2)
NOV 2016 Download View